မြေဈေးကြီးမြင့်မှု၊ တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာတွေ နည်းပါးမှုတွေကြောင့် ရန်ကုန်မြို့နေ အခြေခံလူတန်းစားတွေအတွက် အိမ်ခန်းနဲ့ အိမ်ရာ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ရေးက အိပ်မက်သဖွယ်ပဲ ရှိနေပါသေးတယ် ဟိန်းကိုစိုး ရေးသားသည်။ “ဘယ်တော့မှ အိမ်တစ်လုံးကို ကျွန်မသက်တမ်းတစ်လျောက် ပိုင်ဆိုင်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူး” လို့ အသက် ၄၆ နှစ် အရွယ်၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ရတာကြောင့် နေလောင်ထားတဲ့ အသားအရောင်ရှိသူ.
ယခုနှစ်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ မိုင်းအန္တရာယ်တိုက်ဖျက်ရေး လုပ်ငန်းစီမံကိန်းတွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅ ဒသမ ၈သန်း လိုအပ်မည်ဟု ကုလသမဂ္ဂက ခန့်မှန်းထားသည်
ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းတွင် ကုန်တင်ကုန်ချပြုလုပ်နေကြသည့် ကုန်တင်သင်္ဘောများ။ ဓာတ်ပုံ- Frontier အစိုးရသစ်အနေဖြင့် စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများအား ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရာတွင် စိန်ခေါ်မှုများ ကြုံတွေ့ရဖွယ်ရှိသည်ဟု အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (အေဒီဘီ) က မတ် ၃၀ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်သည့် အစီရင်ခံစာတွင် သတိပေးထားသည်။ “၂၀၁၁ ခုနှစ်က စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေက.
“ပုဂံရဲ့ထူးခြားမှုအကြောင်း ပြောပြကြစို့လား” – မိုက်ကယ် ဖွန့်တိမ်း-လေးတိုး
ပုဂံမြို့မှ လာတာရက်ဇာနဲ့ လာပီဇာ စားသောက်ဆိုင်တွေကို တည်ထောင်ခဲ့သူ မိုက်ကယ် ဖွန့်တိမ်း-လေးတိုးနဲ့ သူ့ဇနီးဖြစ်သူ ဖန်နီတို့က ပုဂံမြို့ရှိ လာတာရက်ဇာနဲ့ လာပီဇာ စားသောက်ဆိုင်တွေကို တည်ထောင်ခဲ့ကြသူတွေပါ။ သူညွှန်းဆိုတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ‘ချစ်ကျွမ်းဝင်ခြင်း’က ရန်ကုန်မြို့မှာ ရင်းနှီးဖော်ရွေတဲ့ တက္ကစီသမား တစ်ဦးနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်လောက်က စတင်ခဲ့တာပါ။.
အိုလီဗာ ဆလိုး နှင့် Frontier ရေးသားသည်။
တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကို တားဆီးဖို့ ကြောက်စိတ်တွေ ဖြစ်လာအောင် အစိုးရက ဖန်တီးခဲ့
ရှောင်ဂလေစင် ရေးသားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်အတွင်းက နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖမ်းဆီးအရေးယူမှုတွေများပြားခဲ့သလို ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူတွေဟာလည်း တရားရင်ဆိုင်ရမှုတွေများလာပြီး နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်များ ကျခံခဲ့ရတာဟာ ကြောက်ရွံ့ခြင်း နယ်ပယ်ကိုဖန်တီးနေတာဖြစ်တယ်လို့ နိုင်ငံတကာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ကတည်းက ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများနဲ့ အစိုးရ ဖြစ်လာတော့မယ့်.